Global Voices teny Malagasy » Nogadraina ireo mpikatroka Rosiana manohitra ny kolikoly noho ny “fitarihana fitroarana” tamin’ny alalan’ny siokan’izy ireo · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Mey 2018 5:07 GMT 1	 · Mpanoratra RuNet Echo Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Fanoherana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Akon'ny RuNet
Polisy misahana ny rotaka manakaiky ny mpanao fihetsiketeshana tamin'ny 5 Mey 2018, tao Moskoa // DonSimon , CC0
Tany Moskoa, notafihan'ny  lehilahy nanao fanamiana Cossack (izay ampiasain'ny governemanta matetika ho vondrona milisy mba hanorisorenana  mpanohitra no sady misoroka ny fanomezan-tsiny mivantana ny polisy), ary koa ny polisy mahazatra sy ny polisy misahana ny rotaka ny famoriam-bahoaka tao amin'ny kianja Pushkinskaya. Olona am-polony no naratra, ka anisan'izany ireo mpanao gazety 25 farafahakeliny, ary maherin'ny 1 600 no notazonina.
Fisamborana marobe no natao taorian'ny 5 May. Nandritra ny herinandro manaraka, mpikarakara ny FBK sy mpikatroka 28 no nosamborina mangingina, voampanga ho nitarika korontana mifototra tamin'ny siokan'izy ireo na ny fizarana ny siokan'izy ireo, araka ny filazan'ny mpisolovavan'ny fikambanana, Ivan Zhdanov, izay nosamborina  ihany koa ny 24 May. Raha voasazy handoa onitra fotsiny sy noafahana ny sasany, ny sasany kosa voasazy higadra 30 andro, sazy faran'izany lava noho ny fahadisoana eo ambanin'ny lalàna Rosiana.
Milaza ireo vondrona mpiaro ny zon'olombelona fa ao anatin'ireo fironana ahitana fanagadrana Rosiana maro dia maro noho ny hetsika antserasera io. Nilaza ny Agora, orinasan'ny lalàna pro-bono izay manome fanampiana ara-pitsarana ho an'ireo voampanga amin'ny raharaha tahaka izao fa mitombo be ny isan'ny fanenjehana noho ny famoahana votoaty na koa fampitàna fizarana votoaty ao amin'ny media sosialy ao Rosia Araka ny hita amin'ny tatitra  farany nataon'izy ireo, Rosiana mpisera aterineto iray no naiditra am-ponja isaky ny 8 andro tamin'ny taona 2017.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/05/26/120072/